Daily Lokmandu – Daily Lokmandu
Author: Daily Lokmandu
Aug182021 by Daily LokmanduNo Comments
भीम रावलले राखे आफू निकटको बेग्लै भेला, ओली पक्षमा लाग्ने संकेत !
काठमाडौं । एमाले विभाजनको तयारी भइरहेको बेला उपाध्यक्ष भीम रावलले भने आफू पक्षका नेता तथा सांसद्हरुको बेग्लै भेला आयोजना गरेका छन्। रावलले पार्टी विभाजन हुने स्थितिमा के गर्ने, कतातिर लाग्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरेको एक नेताले जानकारी दिए। तर भेलास्थल र सहभागी नेताहरु उनले खुलाउन चाहेनन्। पार्टी विवादको सुरुवातमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति निकै आक्रोशित रावल पछिल्लो समय नरम हुँदै आएका थिए। उनी अध्यक्ष ओली र वरिष्ट नेता माधवकुमार नेपालसँग समदूरी थिए। उनी ओलीतिरै खुल्ने आकलन गर्न थालिएको थियो। रावलले मंगलबार बिहान मात्रै सामाजिक सञ्जालमा कविता पोस्ट गर्दै आज हुने काम कुराले पश्चताप भोलि नहोस् भनेका थिए। समाजलाई र आफ्नै लागि गलपासो साबित नहोस्, उनको भनाइ थियो।
देशैभर स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्ने कुलमानको योजना
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी योजनाहरु सार्वजनि गरेको छ । प्राधिकरणको ३६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण व्यवस्थापन पुनर्संरचनादेखि विद्युत व्यापारसम्मका योजना मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन् । उनको योजनामा शहरी सडक उज्यालो बनाउन देशव्यापी स्मार्ट सडक बत्ती जडान गर्नेसम्मका छन् । ‍विद्युत प्राधिकरण ऐन अनुकूल हुने गरी प्राधिकरणसँग सरोकार राख्ने संघसंस्था र कर्मचारीसँगको सहमतिमा कर्मचारीका सेवासुविधा, पेन्सन, उपदान आदिको समेत सुनिश्चित हुने गरी पुनः संरचना गरिने घोषणामा उल्लेख छ । ९० प्रतिशत जनसंख्या ग्रिडको पहुँचमा विगतमा जस्तै गतवर्ष पनि विद्युत खपत गर्ने ग्राहकहरूको संख्यामा बृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गतवर्ष ७.३७ प्रतिशतले ग्राहकको संख्यामा बृद्धि भई ४२ लाख २२ हजारबाट ४५ लाख ३० हजार पुगेको छ । सामुदायिक संस्थातर्फ
शालिनता देखाउँदै तालिबानी नेता, भन्छन्– ‘महिलालाई काम गर्ने र पढ्ने अनुमति दिन्छौं’
एजेन्सी। राजधानी काबुलसहित अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिन सफल भएसँगै तालिबानले आयोजना गरेको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले ‘२० वर्षको सङ्घर्षपछि देशलाई मुक्त गरेको र विदेशीहरूलाई निकालेको’ बताएका छन्। यो पूरै देशका लागि गर्वको क्षण रहेको उनले बताए। ‘अफगानिस्तान अब द्वन्द्वको रणभूमि नहुने हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। हामीविरुद्ध लडेका सबैलाई हामीले माफी दिएका छौँ। हामी बाह्य वा आन्तरिक शत्रु चाहँदैनौँ।उनले भने ।पत्रकार सम्मेलनमा मुजाहिदले कसैलाई पनि हानि नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउन चाहेको बताए। आफूहरू शरिया कानुनका आधारमा महिलाहरूको हक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए। तालिबानको राजनीतिक कार्यालयका अन्य वरिष्ठ नेताहरूसहित कान्दहार क्षेत्रमा मुल्लाह बरादर आइपुगेको बताइएको छ। निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम ‘निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन पाउने
एक्कासी सभामुख सापकोटा भने माधब नेपाल सहित १४ संसदहरुको आशाको केन्द्र
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पद मुक्त गरेका १४ जना सांसदको पद सभामुखको हातमा पुगेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चाहे कारवाहीमा परेका वरिष्ठ नेता नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्ने बोलासम्म रोक्न पाउँछन्। यता नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ जना सांसदलाई कारवाही गरी पदमुक्त गर्न संसद सचिवलालाई सूचना दिइसकेको छ। सोही कारवाही गरिएको व्यहोरा निर्वाचन आयोगमा समेत पुगिसकेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा कुनै सांसदलाई निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले संसद सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। जुन एमालेले गरिसकेको छ। अब सो कारवाहीको सूचना सचिवालयले सभामुख समक्ष पेस गर्नुपर्छ। सचिवालयले आजै सभामुखलाई उक्त पत्र पेश गरिसकेको छ। सचिवालयले उक्त पत्र सभमुखसमक्ष पेश भएको स्वीकार गरिसकेको छ। अब भने सभामुखले सो सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र सदनलाई
एमाले छाडेर माधब नेपालको नयाँ पार्टीमा लाग्ने बादल र लेखराजको तयारी !
काठमाडौं । नेकपा एमालेमा लागेका पूर्व माओवादी नेतामध्ये केही वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गठन गर्ने नयाँ पार्टीमा आउन खोजेका छन् । वृहत वाम एकतामा समेटिने शर्तमा उनीहरूले नेता नेपाललाईसहयोग गर्न तयार रहेको स्रोतको दाबी छ । बादल निकट स्रोत लेज्योतिन्यूजलाई भन्यो – ‘उहाँ(बादल)को कमरेड माधवसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । वृहत वाम एकता हुने शर्तमा उहाँहरूले केपी ओलीको पार्टी त्याग्ने सम्भावना पनि रहेको छ । ओली स्वेच्छाचारी र एकलौटी रहेको उहाँहरूले पहिल्यै निष्कर्ष निकाल्नुभएको थियो ।’ रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, मणि थापा र गौरीशंकर चौधरीले नेपालले खोल्ने नयाँ दलमा आउन इच्छा देखाएको नेपालनिकट स्रोतले पनि पुष्टि गरेको छ । ‘ओलीको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति हुन नसक्ने पूर्व माओवादी नेताहरूको ठहर रहेछ,’ नेपालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘सहयोग गर्ने वचन त दिनुभएको छ, तर अहिलेसम्म निष्कर्षमा
अफगानिस्तान कब्जापछि तालिबानको पहिलो पत्रकार सम्मेलन, आफ्नो भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने घोषणा
एजेन्सी। राजधानी काबुलसहित अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिन सफल भएसँगै तालिबानले आयोजना गरेको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले ‘२० वर्षको सङ्घर्षपछि देशलाई मुक्त गरेको र विदेशीहरूलाई निकालेको’ बताएका छन्। यो पूरै देशका लागि गर्वको क्षण रहेको उनले वताए। ‘अफगानिस्तान अब द्वन्द्वको रणभूमि नहुने हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। हामीविरुद्ध लडेका सबैलाई हामीले माफी दिएका छौँ। हामी बाह्य वा आन्तरिक शत्रु चाहँदैनौँ।उनले भने । पत्रकार सम्मेलनमा मुजाहिदले कसैलाई पनि हानि नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउन चाहेको बताए।आफूहरू शरिया कानुनका आधारमा महिलाहरूको हक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए तालिबानको राजनीतिक कार्यालयका अन्य वरिष्ठ नेताहरूसहित कान्दहार क्षेत्रमा मुल्लाह बरादर आइपुगेको बताइएको छ। निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम ‘निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन पाउ
सुन र चाँदीले भरिएको एक उल्का पृथ्वीको नजिक आउँदै ? एउटा सानो टुक्रा पनि अरबौं भन्दा धेरै मूल्यवान…
एजेन्सी, नासाले एउटा नयाँ उल्कापिण्ड ‘गोल्डमाइन एस्टेरोइड’ पृथ्वीको नजिक आउने बारे जानकारी दिएको छ। यस उल्कापिण्डको विशेषता यो हो कि यो सुनको खानी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो पनि भनिएको छ कि सुन मात्र होईन, तर यो उल्का धेरै अन्य कीमती धातुहरु (बहुमूल्य धातुहरु संग क्षुद्रग्रह पूर्ण) बाट भरिएको छ। यसको एक सानो टुक्रा को लागत अरबौं र ट्रिलियन भन्दा बढी भनिएको छ। पृथ्वी बाहेक सौर्यमण्डलमा धेरै ग्रहहरु छन्। त्यस्तै, वर्षौंदेखि, वैज्ञानिकहरु कुनै एक ग्रह को लागी खोजिरहेका छन् जहाँ अक्सिजन र पानी को उपस्थिति को संभावना छ। तर अहिलेसम्म यस्तो कुनै ग्रह पत्ता लागेको छैन। जे होस्, त्यहाँ अन्य ग्रहहरु को तुलना मा मंगल ग्रह मा जीवन को धेरै संभावनाहरु छन्। हाम्रो सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहहरु बाहेक उल्कापिण्डहरु पनि घुमिरहन्छन्। अब नासाले बताएको छ कि १२४ माईल चौडा उल्कापिण्ड ‘गोल्डमाइन एस्टेरोइड’ हाम्रो
एमाले फुट्नै लागेका बेला भीम रावल उत्रिए मैदानमा, एमाले कार्यकर्तामा पलायो आशा !
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आफू पक्षीय नेताहरुको छुट्टै भेला बोलाएका छन् ।दल विभाजनको तयारी भइरहेका बेलामा बोलाइएको भेलालाई महत्वपूर्ण अर्थले हेरिएको छ ।अबको दिनमा कस्तो रणनीतिका साथ अगाडी बढ्ने तथा कतातर्फ लाग्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि भेला बोलाइएको बताइएको छ । नेता रावल माधवकुमार नेपालनिकट नेता हुन् । तर पछिल्लो समय पार्टी एकताका लागि भन्दै उनी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति नरम हुँदै आएका छन् ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले दल विभाजन खुकुलो हुने अध्यादेश ल्याएको थियो । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बहुचर्चित दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको केन्द्रीय समिति
बल्ल आए माधब नेपाल लाईनमा, यस्तो घोषणा गरेपछि विरोधीहरुले खुलेरै गर्न थाले प्रशंसा !
“आजै केपी ओलीले एउटा काम के गर्नुभयो भने प्रकाश ज्वाला कमरेडलाई पार्टीबाट निकाल्नुभयो,” नेता नेपालले भने, “२०३ जनाको केन्द्रीय कमिटीबाट २६० जना बनाउनुभयो । माधव नेपाल, रामकुमारी झाँक्रीसहित १४ जनालाई पदमुक्त गर्नुभयो । पार्टीभित्र हामी गम्भीर अवस्थामा उभिएका छौँ ।” उनले ओलीसँग एकताको अन्तिम प्रयास गर्छु भनेर घनश्याम भुसालले आग्रह गरेको र सोहीअनुसार वार्ताका लागि पठाउनुअघि नै ओलीले आफूहरुलाई कारवाही गरेको बताए । “त्यही बीचमा घनश्याम भुसाल आएर एकताको लागि अन्तिम प्रयास गर्छु भन्नुभयो । ओलीसँग अन्तिम छलफल गर्न भनेर मैले उहाँलाई पठाएँ । ओलीले आजसम्म गरेका सबै निर्णय फिर्ता लिने र पहिले दिएका सबै बचन पूरा गरेमा एकता गर्न सकिन्छ नि भनेर भुसालले सोध्नुभयो । मैले हुन्छ भनेँ । तर त्यसअघि नै कारवाही भइसकेछ,” उनले भने, “भन्न त केपी ओली भनिसक्नुभएको छ । माधव नेपाल लगायतको निम्ति ढोका बन्द भइस
१३ औं तलाबाट हामफालेर मलेशियामा नेपाली युवाले फाले ज्या’न
काठमाडौं : मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका एक नेपाली कामदारले आ’त्मह’त्या गरेका छन् । अवै’धानिक हैसियतमा रहेका ३५ वर्षीय दिपक चौधरीले मलेसियाको सेवराङ्गजायामा आफू बस्ने भवनको १३ औं तल्लाबाट हा’मफालेर आ’त्मह’त्या गरेको बताइएको छ । चौधरी त्यहाँ सुरक्षागार्डको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । उनको नेपाली ठेगान खुल्न बाँकी रहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।उनी सोहि कण्डोमिनियमको छैटौ तलामा अरु देशका श्रमिकहरुसँग वस्ने गरेका थिए । सेक्युरिटि गार्डका रुपमा मलेसियामा कार्यरत रहेका उनी लामो समयदेखि अवै’धानिक अवस्थामा रहेका थिए । आफुलाई कहिले चितवन कहिले नवलपरासी घर वताउने भएपनि घर र ठेगानाको वारेमा पुरै परिचय खुलेको छैन । साईबर जाया डोमिनिकमा उनी सेक्युरिटि गार्डको रुपमा कार्यरत रहेका थिए । घटना हुना साथ प्रहरी आएर श’वलाई लिएर गएको र आफुहरुले यो भन्दा थप जानकारी केहि थाहा नभएको स
बल्ल आए माधब नेपाल लाईनमा, यस्तो घोषणा गरेपछि विरोधीहरुले खुलेरै गर्न थाले प्रशंसा ! (509)
घरबाट आफन्तको जान भनेर हिँडेकी १६ वर्षीया कृशलाको शव सडेको अवस्थामा घर नजिकै भेटियो (354)
एमाले फुट्नै लागेका बेला भीम रावल उत्रिए मैदानमा, एमाले कार्यकर्तामा पलायो आशा ! (335)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (312)
एमाले छाडेर माधब नेपालको नयाँ पार्टीमा लाग्ने बादल र लेखराजको तयारी ! (295)
एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो ! (282)
१३ औं तलाबाट हामफालेर मलेशियामा नेपाली युवाले फाले ज्या’न (277)
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (272)
© 2021 Daily Lokmandu